Ngwa - Motadata
Maka Ndị otu akụrụngwa
Na-akwado njikwa nke akpaaka kwadoro
Kwanye otu njikwa akụrụngwa ike yana akpaaka nwere ọgụgụ isi, usoro ahaziri ahazi, yana mkpesa siri ike
Ihe ịma aka nke Otu akụrụngwa
Ndị otu njikwa akụrụngwa na-adaberekarị na Omume ntuziaka na akwụkwọ Excel iji jikwaa ma soro arịrịọ nchịkwa niile. Agbanyeghị, ka nzukọ a na-abawanye, nke a abụghị naanị na-egbochi nrụpụta azụmaahịa mana ọ pụtakwara na ọnụ ahịa arụmọrụ dị elu.
Chọrọ ọhụhụ n'ime mbọ ịnyefe ọrụ nke otu akụrụngwa ha.
Motadata na-enye Platform ITSM ọgbara ọhụrụ nwere ike ịnyere Centrally jikwaa ma debe arịrịọ akụrụngwa niile wee mee ka ọ dị mma, nnyefe ngwa ngwa nke ọrụ akụrụngwa kwadoro site na Smart Automation.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka Ụlọ Ọrụ Otu
Streamline njikwa akụrụngwa na akpaaka usoro na Motadata Ọrụ
Jiri usoro akpaaka kwalite arụmọrụ arụmọrụ
Kwado ndị ọrụ ka ha bulie arịrịọ dị ka arịrịọ maka ngwaike ọhụrụ, ịnweta akụrụngwa, wdg.
N'iji njirimara ụzọ ụgbọ okporo ígwè auto-tiketi na-akwado nke AI dabeere na smart ibu itule algọridim, kenye arịrịọ mbata na-akpaghị aka na ngalaba kwesịrị ekwesị.
Enwere ike iji usoro a na-arụ ọrụ iji mejuputa ụzọ dị mkpa iji dozie ihe omume ma ọ bụ arịrịọ ndị nwere mmetụta dị elu ngwa ngwa.
Zaghachi ngwa ngwa na arịrịọ nnabata nwere ozi metụtara site na iji usoro nnabata ọtụtụ ọkwa.
Mee mgbanwe gaa na njikwa akụrụngwa na-arụ ọrụ
Jikwaa ozi metụtara akụ na-abụghị IT site na CMDB agbakwunyere wee soro usoro ndụ ha dị ka akụ IT site na iji modul ITAM.
Debe ihe niile mere ejikọrọ na akụ site na ijikọ tiketi ndị dị mkpa, soro usoro eji akụrụngwa eme ihe, ma nọgide na-amata maka mmeghari ohuru na ngafe.
Site na nyocha siri ike, akụkọ nwere ike ịhazi ya, yana dashboard ọgbara ọhụrụ, nweta nghọta n'ime nsogbu ndị na-eme ugboro ugboro wee chọpụta ha ọbụna tupu ha ebilite.
Nweta visibiliti zuru oke n'ime ụdị ọrụ niile wee wepụta usoro iheomume iji debe nrụzi na nhazi oge niile site na iji modul njikwa oru ngo.
Belata ọgbaghara nke Mgbanwe na akụrụngwa kpatara
Jikwaa nnukwu mgbanwe na akụrụngwa dị na nzukọ site na iji modul njikwa mgbanwe.
Gwa ndị ọrụ niile na ndị isi ihe na-akpachapụghị anya gbasara oge a na-atụ anya na ọ ga-akwụsị na oge mbelata site na iji njiri mara omenala nke arụ ọrụ arụ ọrụ na-akwado.
Mepụta usoro maka ịhazi, mmejuputa na nyocha mgbanwe. Megharịa usoro nnabata na ọkwa ọ bụla nke mmejuputa mgbanwe site na iji usoro nnabata ọtụtụ ọkwa.
Uru maka Otu akụrụngwa
Nweta ọhụhụ zuru oke ka otu ụlọ ọrụ gị si arụ ọrụ na Motadata ServiceOps
Portal jikọtara ọnụ
Mee ka ọrụ dị 24 × 7 site na ọnụ ụzọ dị n'otu ma mee ka ndị ọrụ nwee ike ịkwalite arịrịọ n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
Nhazi enweghị koodu
Hazie ikpo okwu ITSM anyị ngwa ngwa site na njiri ịdọrọ na dobe ka ọ dabara na ihe nhazi gị chọrọ.
Iji REST API, jikọta ngwa ndị ọzọ na Motadata ServiceOps ngwa ngwa.